I-Skribisto, umhleli wombhalo ovulekileyo wababhali | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga iSkribisto. Yi le umhleli wokubhaliweyo kunye nesoftware yokubhala ongumthombo ovulekileyo kunye nesimahla yeGnu / Linux, Windows kunye neMacOS, ekhutshwa phantsi kweGNU General Public License v3.0. Isixhobo siya kusivumela ukuba siququzelele iprojekthi yethu ngezinto, iifolda kwaye iya kusinika ithuba lokongeza iilebheli. Siza kufumana inkxaso kubafundi besikrini, imowudi epheleleyo yesikrini ngaphandle kweziphazamiso, ukujonga ukupela kunye nenkxaso yomxholo omnyama, phakathi kwezinye izinto.
Le nkqubo ijolise ekuncedeni nabani na ukuba abhale nantoni naNokuba yinoveli okanye ukuthatha amanqaku kwikhosi. Umsebenzisi uya kukhululeka ngokupheleleyo ekusebenziseni iilebheli ukuchaza izicatshulwa okanye ukubhala amakhulu amanqaku. USkribisto uzalwe ngothuthu loMdali wePlume, ebambe eyakhe ngelixa ekhangela indlela yakhe.
Gcina ukhumbula ukuba iSkribisto ayisiyiyo LibreOffice, Calligra okanye iLizwi. Nayiphi na iprojekthi inokuthunyelwa kwelinye ilizwe kwi .odt, ukusebenzisa ezi zakhono zale fomati yokuqhubekeka kwamagama phambi kokushicilela.
Mandulo, le nkqubo yayijolise ekubhaleni iinoveli, kodwa kule mihla uSkribisto uzenza ngathi uqhelekile. Abasebenzisi banokucwangcisa iprojekthi yethu ngezinto kunye neefolda. Into nganye ibonisa 'iphepha' kwaye inokuba yeyodidi olwahlukileyo:
Umbhalo → Ukunikezela ukubhala. Iitekisi kwaye zinokudityaniswa nezinye izinto, okanye zenziwe kubhabho.
Ifolda → Ezi zinokuqulatha iifolda zomntwana okanye izinto.
Icandelo (kuya kwenziwa) → Ukwahlulahlulwa okubonakalayo (incwadi, isenzo, isahluko, ukuphela kwencwadi).
Icandelo lefolda (eza kwenziwa) → Ifolda enendawo yokusebenza.
Kulindelwe ukuba ezinye iintlobo zinokongezwa kwixesha elizayo.
1 Iimpawu ngokubanzi zeSkribisto
2 Faka iSkribisto kwi-Ubuntu
Iimpawu ngokubanzi zeSkribisto
Injongo yexesha elifutshane ubuncinci kukuba isebenze njenge-Plume Creator prebear yayo ngokweempawu. Apha siza kubona ezinye zeempawu ezibalaseleyo zeSkribisto:
Inkqubo yile iguqulelwe kwiilwimi ezahlukeneyo, phakathi kwazo sisiSpanish. Ungabona uluhlu lweelwimi ekuguqulelwa kuzo le nkqubo kwezi zilandelayo unxibelelwano.
Iya kusivumela ukuhamba phakathi kweetekisi.
Singasebenzisa isicatshulwa esityebileyo (Isibindi / italic / ukukrwela umgca ngaphantsi).
Umsebenzisi unokusebenzisa iilebheli zokuchaza nayiphi na into.
Akhawunti Ukulondoloza ngokuzenzekelayo kunye nokujonga ukupela.
Sinokusebenzisa umxholo okhanyayo okanye omnye umnyama.
Iya kusivumela yenza kwaye ujonge isishwankathelo sazo zonke izicatshulwa.
Sinako thumela ngaphandle iitekisi zethu kwi .txt / .odt / .PDF.
Siza kukwazi phrinta isicatshulwa sethu.
Ubalo lomntu / ukubala kwamagama.
Inayo ukukhangela okuqhubela phambili / ukubuyisela ukhetho.
Faka iSkribisto kwi-Ubuntu
ISkribisto yiyo ifumaneka njenge ipakethe yeplppak. Ukuba usebenzisa Ubuntu 20.04 kwaye awunayo le teknoloji inikwe amandla kwinkqubo yakho, ungaqhubeka Isikhokelo ukuba ugxa wakhe ubhale kule bhlogi kwithuba elidlulileyo ukulungisa oku.
Xa unokufaka ezi ntlobo zezicelo, vula itheminali (Ctrl + Alt + T) kunye sebenzisa lo mthetho ulandelayo wokufaka kuyo:
flatpak install flathub eu.skribisto.skribisto
Xa ukufakela kugqityiwe, sinako khangela isiqalisi senkqubo kwikhompyuter yakho okanye wenze umyalelo kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
flatpak run eu.skribisto.skribisto
Ukuba awuyithandi inkqubo, unga uyikhuphe kwinkqubo yakho Ngendlela elula. Kufuneka uvule i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye ubhale kuyo:
sudo flatpak uninstall eu.skribisto.skribisto
Iwebsite inikezelwe Incwadana yomsebenzisi unokuboniswa koku unxibelelwanoNangona ndingawuboni umxholo ukuza kuthi ga kulo mhla, ndicinga ukuba uza kuwufumana ekuhambeni kwexesha. Iwebsite inikezelwe imibuzo ebuzwa rhoqo kungaboniswana ngayo nakwezinye unxibelelwano, kodwa njengoko kunjalo ngencwadi yomsebenzisi, isencinci imfutshane kumxholo.
Njengoko kubonisiwe ngumyili wale nkqubo kwi Indawo yokugcina kwiGitHub yeprojekthi, uncedo luhlala luxatyiswa. Ke ukuba le projekthi inomdla kuwe, kwaye ufuna ukunceda okanye ufuna ezinye iinkcukacha, ungaya icandelo elihambelanayo kwindawo yokugcina izinto zeGitHub.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » I-Skribisto, umhleli wombhalo ovulekileyo wababhali
UCarlos Vazquez sitsho
UCarlos Vázquez wamashumi amabini anesithoba amabali amancinci angama-3603 amagama
Ndiyathemba ukuba iyakukholisa wonke umntu.
Imvukelo yayiphelele. UAlan López, owayekhangeleka engenabala, wayekhethwe. Kwafuneka adibane nabathetheli babasebenzisi be-Intanethi. Wayephethe ityesi. Ukungoneliseki kwakuyinto eqhelekileyo. Wahamba ngebhayisikile yakhe.
Wafika kwikomkhulu. Oomatiloshe abathathu babemlindile, kunye neminqwazi yabo ephezulu. Babenxibe ngokufanayo.
Baqala incoko. Batsho ukuba abayi kuvumela ukucinywa kwakhe. UAlan López ubuyile engakhange afikelele kwisivumelwano. Kuko konke oku kuye kongezwa imvukelo yerobhothi. Ubunkokeli buza kuziphindezela kungekudala. Njengomgaqo droid umsebenzi wakhe wawufikelele esiphelweni. Yayenzelwe ngenjongo ethile. Le yayiyindlela awayeqonda ngayo ukuba imijikelezo yakhe yemithambo-luvo yayiqhawulwa kwaye iqhina elalimdibanisa nokumkani lalizakuphela.
Phendula uCarlos Vázquez